silentnight miracoil kumatilasi | Rayson
Rayson e Rayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. imikhiqizo Main China okusha asongwe Euro eziphezulu Pocket Spring semibhede King Single manufacturers-. New asongwe Euro eziphezulu Pocket Spring semibhede King Single Rayson Spring semibhede Umkhiqizi Umkhiqizo has a ukuthungwa eqinile metal. It is exquisitely iphucuziwe nge sekugcineni ecwebezelayo esingenayo burrs noma ekuqaleni. New asongwe Euro eziphezulu Pocket Spring semibhede King Single Rayson kuqukethe obucayi manchineel izingxenye. Lezi zinhlobo zikasawoti zihlanganisa amaphampu, compressors, ugesi kanye nezinye izingxenye ashiselwe futhi ashiselwe.
Rayson isungule ukuba umkhiqizi professional nabaphakeli onokwethenjelwa imikhiqizo ephezulu. Kuyo yonke inqubo yokukhiqiza, sisebenzisa ngokuqinile ukulawulwa kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO. Kusukela kusunguliwe, ngaso sonke isikhathi sinamathela ekubuseni okuzimele, ukuphathwa kwesayensi, kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo, futhi kunikeze izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ukuze zihlangane futhi zize zidlule nezidingo zamakhasimende. We isiqinisekiso umkhiqizo omusha yethu miracoil silentnight kumatilasi kuyokulethela eziningi izinzuzo. Sihlala simi ukuze sithole uphenyo lwakho. silentnight miracoil kumatilasi Njengoba enikelwe okuningi zokuthuthukisa umkhiqizo nekhwalithi kwesevisi, sesisungule idumela eliphezulu ezimakethe. Siyathembisa ukuze akwazi ukunikeza wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngesevisi ngokushesha futhi professional esehlanganise pre-yokuthengisa, yokuthengisa, futhi emva-sales amasevisi. Kungakhathaliseki lapho ukhona nakunoma iyiphi ibhizinisi bekwi, singathanda ukusiza ukuba ubhekane nanoma imiphi daba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe mayelana ezintsha zemikhiqizo silentnight miracoil kumatilasi yethu noma inkampani yethu, ukhululeke us.The yonke inqubo contact ukukhiqizwa Rayson is uvalwe elawulwa, kusukela ukukhetha izindwangu ayetholakala ekucubunguleni kwabo ku izingubo esiphelele.
Ngemva kweminyaka yentuthuko, sesisungule eside nokubambisana ubudlelwano namakhasimende ethu emhlabeni wonke. Sicela qiniseka ukuthi sinelungelo okuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo lafika izimpahla ezithunyelwe. Thina ngobuqotho ukwamukela nophenyo futhi ucingo lakho.
Kusukela kusungulwa, Rayson luhlose ukuhlinzeka izixazululo ezivelele umxhwele amakhasimende ethu. Sisungule isikhungo sethu se-R & D sesakhiwo somkhiqizo kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo.
Amakhasimende abafuna ukwazi okwengeziwe umkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, nje uxhumane nathi.
Ngingabakha kanjani ubuhlobo amasampula ezinye?
Ngemuva kokuthi uqinisekise umnikelo wethu bese usithumela izindleko isampula, sizoqeda isampuli ngaphakathi 15 ~ 20 izinsuku. Ungabuza inkampani express eyolanda isampula kusuka enkampanini yethu noma ungakwazi usithumelele DHL, FedEx noma UPS inombolo ye-akhawunti collect, singakwazi ukuthumela isampula kuwe nge-akhawunti yakho.
isikhathi esingakanani okufanele kumatilasi wakho wokugcina?
Njalo kumatilasi lihlukile. Uma baphonsa ebusuku noma uvuke nobuhlungu sekuyisikhathi sokuba uthole kumatilasi entsha kungakhathaliseki ubudala bayo. Sincoma kokuhlola ithegi umthetho bese ushintsha okungenani njalo eminyakeni eyisishiyagalombili.
Ungangisiza wenze umklamo ethu noma usebenzise logo yami umkhiqizo?
Nathi singenza kumatilasi ngokuvumelana umklamo wakho noma ukunikeza OEM inkonzo nje udinga ukusinika umkhiqizo wakho wobuciko noma ilogo izithombe.